China Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone Trimming maka Jeans rụpụta na ụlọ ọrụ | Erjiao
Ss12 Ss8 Banding Ka Mma Ihe kacha mma ...
N'ogbe High Quality Piel Plastic S12 Ab T ...
N'ogbe SS8 Hot Sales Rhinestone trimming, plastic ...
Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone Trimming n'ihi na ...
Chinese SS6 Rhinestone Banding trimming, Crystal Rhi ...
Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone Trimming maka Jeans
Isi nkọwa nkọwa ngwa ngwa Productdị ngwaahịa: Rhinestones Ihe: Glass, Glass Rhinestone na Plastic Shape: Gburugburu Rhinestones :dị: Loose Rhinestones Technics: Sew-On Style: Flatback Use: Bags, Garment, Shoes, Diy decoration, Party, Cloythes, Hat, etc. Ebe nke Si Malite: Zhejiang, China Ahịa aha: Maijiao Model Number: 0650 Product Name: Plastic Rhinestone Trim Usage: Uwe akpụkpọ ụkwụ akpa T-uwe elu MOQ: 1600 yaadị kwa agba Asambodo: ISO Packin ...
Glass, Glass Rhinestone na Plastic
Akpa, Uwe, Akpụkpọ ụkwụ, Diy mma, Party, Cloythes, Hat, wdg.
Plastic Rhinestone Kpaa
Uwe Akpụkpọ ụkwụ Akpa T-shirt
1600 yards kwa agba
Ogwe kaadị 10
7-15 Workingbọchị Ọrụ
100000 Yard / Yard kwa izu
10 kaadị na kaadị. 50 yad mpịakọta. 100 yad mpịakọta.
Ibu (Yards) 1 - 200000 > 200000
Ihe: Nkume: kristal kristal A +
Agba: Crystal, agba, na AB kristal.
Ngwugwu: kaadị 10 kaadị, mpịakọta 50, mpịakọta 100.
Mbupu: 3-15 ụbọchị ọrụ
Ihe oyiyi zuru ezu
PC / Yards
Nkwakọ ngwaahịa nkwakọ: kaadị kaadi 10. 50 mpịakọta mpịakọta. 100 mpịakọta mpịakọta.
Port: Yiwu Port na Ningbo Port
Ahịa kacha elu
Rhinestone Strass iko Chain
Nabata ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ anyị. ——Wulọ ọrụ mmepụta ihe nke Yiwu Zhuyi
1. 1. Afọ 20 nke ahụmịhe na imepụta na mmepe.
2. A na-ahaziri ngwaahịa niile na nyocha gburugburu ebe obibi.
3. Advanced ebu Ndinam akụrụngwa na ebu mmepụta mmekọ.
4. Nke kasị ala MOQ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe price.
5. Ọrụ zuru oke na-arụ ọrụ mgbe emechara.
Pịa ebe a Companylọ ọrụ ikike
Q1: Gịnị bụ ọnụahịa na MOQ?
A: Factory kpọmkwem price, anyị MOQ bụ 1600 yaadị kwa agba.
Q2: Enwere m ike ịtụ obere?
A: Ee, a nabatara obere ọnụọgụ.
Q3: Kedu maka mmesi obi ike dị mma?
A: A ga-eziga ngwongwo niile tupu ịlele ogo ma anyị ga-ezitere gị foto maka ịlele, anyị nwekwara nyocha dị mma ma ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na Nkwado ahia site na nke Alibaba ga-etinye aka na njikwa mma dị ka ndị ọzọ.
Q4: you na-enye sample?
A. Ee, anyị na-enye ihe ntanetị n'efu.
Q5: Ebee ka ahịa gị dị?
A: Dabere na 10 afọ ahịa ahụmahụ, anyị na-azụ ahịa na ọtụtụ nke ụwa (dị ka Germany, UK, France, Netherlands wdg), North America (USA, Canada wdg) Asia (Japan, Korea, Malaysia wdg), Australia, New Zealand, Brazil wdg.
Q6: Olee otu m ga-esi kwụọ ụgwọ maka nzụta m?
A: You nwere ike ịkwụ ụgwọ site na Kaadị akwụmụgwọ, Bank, Western Union na Paypal wdg.
Q7: Gịnị bụ gị ụgwọ okwu?
A: 30% nkwụnye ego, 70% itule ụgwọ tupu mbupu.
Q8: Ogologo oge ole ka nnyefe oge?
A: Obere iji, ọ na-ejikarị na-ewe ihe 1 ka ụbọchị 3, n'ihi na nnukwu iji ọ na-ewe banyere 3-15 ụbọchị.
Q9: Ogologo oge ole ka njem oge?
Azịza: Dị ka ọ na-adị, ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 7, mana maka mpaghara na mba ndị dịpụrụ adịpụ, na-ewe ihe dị ka ụbọchị ọrụ 7-15.
Q10: Onwere nọmba nsuso nke usoro m?
A: Ee, anyị na-ebuga ngwongwo ọ bụla na nọmba ọnụọgụ ha, ị nwere ike ịlele ọnọdụ mbupu na weebụsaịtị ndị metụtara ya.
Pịa ebe a Zitere m ajụjụ
●Afọ 20 nke ahụmịhe na imepụta na mmepe.
● A na-ahaziri ngwaahịa niile na nyocha gburugburu ebe obibi.
● Advanced ebu Ndinam akụrụngwa na ebu mmepụta mmekọ.
P HA EBE A HLỌ
●Nke kasị ala MOQ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe price.
●Ọrụ zuru oke na-arụ ọrụ mgbe emechara.
Nke gara aga: SS6 Rhinestone Banding trimming maka akwa
Osote: Plastic Rhinestone Beaded Kpaa Ab ụcha Rhinestones Banding maka Dress na Guatemala
Hot Sale Guatemala Rhinestone Stone Chain, Plas ...
N'ogbe rhinestone yinye suppliers, rhinestone ...
Popular Purpler Plastic Rhinestone Banding Roll ...
Cheap Crystal Plastic Trimming Rhinestone Bandi ...
Rhinestone Chain trimming N'ogbe Plastic Rhi ...
Factory N'ogbe fashionable Light Purple Pla ...